SP-L29 Soicare ime akara 300ml smart n'ụlọ mkpa mmanụ Bluetooth music ọkà okwu aromatherapy diffuser, China SP-L29 Soicare ime akara 300ml smart n'ụlọ Bluetooth mmanụ ọkà okwu aromatherapy diffuser Manufacturers, Suppliers, Factory - Sunpai Industries Limited
SP-L29 Soicare ime akara 300ml smart n'ụlọ mkpa mmanụ Bluetooth music ọkà okwu aromatherapy diffuser
Soicare ime akara 300ml smart n'ụlọ mkpa mmanụ Bluetooth music ọkà okwu aromatherapy diffuser
· ♫[Egwuregwu Egwuregwu Bluetooth]Otu n'ime ihe dị mkpa maka nnọkọ ezinụlọ. The Music diffuser wuru na-Independent Bluetooth Ọkà Okwu. Ọnụ ego ịgba mmiri na-agba agba ga-agbaso usoro egwu ahụ. N’egwú egwu ahụ na-agba ọsọ, ngwa ngwa foogu ga-agbanwe. Can nwere ike ịgba egwu soro egwu na ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe, na -emepụta izu ike, ihunanya, ikuku ohere.
· ♫[Ime Remote & ngụ oge]300ML diffuser nwere 4 ịgba alụlụụ ngụ oge ngosiputa: 60Min / 120Min / Intermittent / Na-aga n'ihu alụlụ mode. Nwere ike ịhazigharị na uwe maka igwe ojii tupu ị lakpuo ụra site na iji bọtịnụ nke mgbasa ma ọ bụ akara ntanetị. Ma dị ka ụra ụra, ịnwere ike iji akara ntanetị gbanye / gbanyụọ ọkụ abalị mgbe ị na-eteta ụra n'etiti abalị, nke na-eme ka ndụ gị dịkwuo mfe ma dị mma.
· ♫[8 Agba Na-agbanwe Agbanwe]Ihe nkesa mmanụ dị mkpa iji nweta ọkụ ọkụ 8 na-agbanwe ọkụ ọkụ na-agba gị ume inwe obi iru ala na izu ike n'abalị. Soft yi ìhè & alụlụ si romance na ịma mma na-agwakọta ọnụ ike a na-ekpo ọkụ na ihunanya oge maka a ụbọchị ma ọ bụ ọzọ. A pụkwara iji ọkụ na-ekesa ìhè abalị dị ka oriọna ụra na oriọna tebụl maka ime ụlọ, ọmụmụ, ma ọ bụ ebe ọrụ.
· ♫[Mmiri nke ikuku Ultrasonic]Igwe ikuku ikuku na-anabata teknụzụ ultrasonic alụlụ, na-ejigide ihe ndị dị mkpa nke mmanụ dị mkpa, na-ekwe ka mmanụ ndị dị mkpa na ụmụ irighiri mmiri na-agbaze n'ime mmiri ka ewepụta ha kpamkpam ikuku ma na-etinyekwu ahụ n'ụzọ dị mfe karị, na-edozi ahụ ma na-amụba iru mmiri nke ikuku. . Na iru mmiri na-adị jụụ, ị nwere ike ịnụ ụtọ ụra na-enweghị mkpọtụ.
· ♫[Ndụ Healthy & Nchedo]Mgbe ị gbakwunye mmanụ ndị dị mkpa, ihe na-esi ísì ụtọ na-emepụta ihe na-atọ ụtọ na-esi ísì ụtọ n'ime ụlọ, nke na-ekpuchi ísì anụ ụlọ ma ọ bụ ị smokingụ sịga ma ọ bụ ihe ọjọọ ndị ọzọ, na-ebelata ike ọgwụgwụ na nchekasị nke uche. Onye na-ekesa ihe na-enweghị mmiri na-ekpuchi mmiri, ma jiri ngwongwo PP na-eguzogide ọgwụ, nke na-adịghị egbu egbu, na mkpuchi eletrik dị mma, nke na-eme ka nchekwa nke gị na ezinụlọ gị.
SP-L08 SOICARE 300ml yabasị isi osisi ọka aromatherapy ultrasonic osisi esi ísì diffuser
Atụmatụ SP-G07 nke SOICARE 200ml bamboo fiber solid osisi eletrọniki ultrasonic esi ísì ụtọ diffuser